October 23, 2021, 10:16:51 AM
2021 Oct 23 08:23:27
2021 Oct 23 08:23:21
2021 Oct 23 06:50:43
cre8: Hello Everyone!
2021 Oct 22 23:31:05
Shwe phyu: Hello
2021 Oct 22 21:01:32
chit ko aung: ဟီးဟီးခုထိဖတ်မရသေးဘူး စာအုပ်တွေကို
2021 Oct 22 20:40:50
Nay latt: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ
2021 Oct 22 20:34:51
chit ko aung: ကျောင်းသားသစ်တိုင်ပတ်နေလို့ပါဗျ
2021 Oct 22 20:32:05
chit ko aung: hi မဂ္်လာပါဗိ
2021 Oct 22 10:55:07
Thant Soe: စာက ဘယ်မှာ ဖတ်ရတာလဲ
2021 Oct 21 21:56:21
Moe Moe Khing: စာအုပ်တွေဘယ်မှာ ဖတ်ရမှာလဲ ရှင်းပြကြပါall friends
2021 Oct 21 20:45:23
ko myint thu: အရည်ပျော်သွားသောမာနရှင်မလေးကဆက်မရေးသေးဘူးဗျာ
2021 Oct 21 02:38:26
lin lin mg: အဲ့စာအုပ်မှာပါတဲ့အန်တီနှစ်ယောက် အန်တီတစ်ယောက်က အန်တီဝင်းတဲ့ တစ်ယောက်က သိင်္ဂီတဲ့ ကိုနိုင်ကြီးက မိုးစက်ကိ
2021 Oct 21 02:35:42
lin lin mg: သူရိယခေါမိုးစက် ကောင်လေးက offerလုပ်တာလေ အ့ဟာလေးဖတ်ချင်လို့ စအုပ်နာမည်လည်းမသိဘူး ကူညီပါဦး
2021 Oct 20 23:10:50
PhyoChan: ဘယ်ကို သွားချင်ကြတာလဲဗျ
2021 Oct 20 22:38:19
Pro Reader: Hello
2021 Oct 20 22:37:28
Pro Reader: လမ်းညွှန်ကြပါဦး ကျောင်းက ကျယ်လွန်းနေလို့
2021 Oct 20 15:15:42
MyoKo@#Oo: ကျောင်ဝန်းကကျယ်တော့ ဘယ်ကိုသွားရမယ်မသိလို့ လမ်ညွန်ပါအုံး
2021 Oct 20 11:23:04
2021 Oct 20 10:21:08
2021 Oct 20 10:20:42
2021 Oct 20 10:14:29
love boy: Hi
2021 Oct 20 08:51:33
Amiodarone: သီတင်းကျွတ် အခါသမယ မှာ အားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ
2021 Oct 20 02:02:20
2021 Oct 19 22:02:55
2021 Oct 19 21:08:12
KoZen: @thihadannah: ရေးပေးပါမယ်ခင်ဗျ .. ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်များနေလို့ပါ။ လဘင်း နည်းနည်းထပ်ရှည်ပေးပါဦး ..
2021 Oct 19 20:45:12
thihadannah: @ ko zan ကိုဇန်ရေ လူကြီးသူမတွေကိုကန်တော့ပြီးရင် ဘုံစံနန်းလေး အာရုံခံပေးပါ။ လဘင်းရှည်နေပြီ
2021 Oct 19 20:22:55
Abm: Hi ,I am the new.nuce to see u all.
2021 Oct 19 19:51:59
2021 Oct 19 19:16:32
Mikoyan: Mingalar par
2021 Oct 19 15:54:19
2021 Oct 19 09:43:04
ကိုရင်ပြုံး: စာဖတ်ချင် အဲဒီမှာ သွားဖတ်ပါ
2021 Oct 19 09:42:44
2021 Oct 19 09:12:19
2021 Oct 19 09:12:18
2021 Oct 19 07:29:26
2021 Oct 19 04:17:25
2021 Oct 18 15:55:11
2021 Oct 18 13:28:51
cho win: စာဖတ္ခ်င္လို႔ဝင္လာတာဘယ္မွာဖတ္ရမလဲ
2021 Oct 18 12:20:25
tarteelay: ဇာတ်ကားနာမည် sex and zen II ပါ
2021 Oct 18 12:15:49
Min Zaw Zaw: hello
2021 Oct 18 12:15:39
2021 Oct 18 09:52:27
Koko106: မင်းသားကအဆိပ်မိတော့ မင်းသမီးအပေါ်ကတက်လုပ်ပေးမှ အဆိပ်ပြေတာ အဲ့ကားလေးသိရင် ပြောကြပါအုံးဗျ
2021 Oct 18 09:51:22
Koko106: တရုတ်ကားဗျာ မင်းသမီးကယောကျာ်းလေးဟန်ဆောင်ပြီး သိုင်းသင်တာ မင်းသမီးအဖေက underwear ကို သော့ခတ်ပြီးလွှတ်လိုက်တာ
2021 Oct 17 23:18:17
Thar Hla: HongKong Doll ရဲ့ကားလေးတွေရှိရင် မျှကြပါဦးညီကိုတို့
2021 Oct 17 19:49:30
jarni: ဟုတ် Bro ၂၄ မျက်နှာ မျှော်နေမယ်နော်
2021 Oct 17 19:22:06
၂၄ မျက်နှာ: ကို @jarni ရေ ၊ PW အပိုင်း ၂ က နည်းနည်းကြာမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်ဂျာ ၊ ဇာတ်လမ်းတော့ ဆင်နေပါပြီ 😁
2021 Oct 17 16:44:31
2021 Oct 17 15:59:39
Capitalh555: Soe myat nandar hdလေး ရှိရင် ရှဲပေးပါလား ခင်ဗျ?
2021 Oct 17 13:22:08
jarni: Bro KoZen လည်း ပျောက်နေတယ် အလုပ်များနေလား သိဘူး
2021 Oct 17 13:21:15
jarni: ဒီတခါ ကို ၂၄ မျက်နှာ တစ်ယောက် ခွင့်မတိုင်ပဲ ပျောက်နေတယ် ! ဇာတ်လမ်းက သိမ်းမယ် ၊ ဆက်မယ် တန်းလန်းကြီး ဟီး စတာနော်
2021 Oct 17 03:24:40
Tharlunmin: Goodnight all members
2021 Oct 17 00:19:28
Johnny Depp: Good night
2021 Oct 16 21:03:17
2021 Oct 16 19:27:33
Ko Hein Thu: Good night
2021 Oct 16 16:06:12
2021 Oct 16 00:08:49
Sai Pan: Good night ပါ
2021 Oct 16 00:08:47
2021 Oct 15 23:59:26
Myo Kyaw Thu: မင်္ဂလာပါ
2021 Oct 15 22:15:26
PhyoChan: Good Night ပါ
2021 Oct 15 22:03:07
Min Thit: Hi
2021 Oct 15 20:21:27
Hnuubar: Hello everyone, I’m new member. Nice to meet you all.
2021 Oct 15 16:11:03
Thukhant: မင်္ဂလာပါ မြကျွန်းညိ
2021 Oct 15 15:30:34
2021 Oct 15 07:41:06
john7: ရဲရင့် တဲ့ ရဲဝင့် ပေါ့ဗျာ
2021 Oct 15 04:49:42
KoZen: အိမ်ချင်မူးတူးနဲ့တင်လိုက်တာ အခန်း ၂၄ မှာ မန်နေဂျာ ရဲဝင့်ကနေ ရဲရင့်ဖြစ်သွားတယ်။ အမှားပြင်ပြီးပါပြီခင်ဗျ
2021 Oct 15 00:15:42
2021 Oct 15 00:05:02
ပန်းမုဆိုး: https://achittatkathomyakyunnyo.com/index.php?topic=978.msg40243#msg40243 cuckold swinger ‌လေးပါ
2021 Oct 14 23:33:49
2021 Oct 14 13:52:31
2021 Oct 14 11:03:43
2021 Oct 13 23:30:53
winewinelay: ကိုနရသူ ဘာလို့ဆက်မရေတော့တာလဲ
2021 Oct 13 23:30:29
2021 Oct 13 23:30:28
2021 Oct 13 22:27:28
Doegyi: ချမ်းကို အသစ်မထွက်​​တော့ဘူးလား
2021 Oct 13 21:59:48
uncle soe: ကိုနရသူ အမာခံ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ။အားပေးမပျက်ပါဗျာ။
2021 Oct 13 16:17:35
ဂျုံတုံး: သူ့ဇတ်လမ်းတွေ feel နေလို့ pdf လုပ်မယ်ဆိုမှ အဲ့လိုတော့ မလုပ်နဲ့ဗျာ...
2021 Oct 13 16:14:54
ဂျုံတုံး: ကိုနရသူရေ... ဆရာ့ရဲ့ အမာခံ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါနော်....
2021 Oct 13 16:00:02
KoZen: @Seven: ဟိဟိ .. ဘူများလဲနော် ..
2021 Oct 13 14:52:36
Seven: ဟိဟိ စိတ်ထင်တာလည်းဖြစ်နိုင်
2021 Oct 13 14:51:43
Seven: Ko Zen စာရေးတာက ဖတ်စာနေကျရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့အရေးအသားနဲ့တူနေတယ်
2021 Oct 13 14:07:03
sgservice: Camera man ဆိုတော့ ယောက်ကျားလေးကော မလိုဘူးလားလို့ 😁😁😁
2021 Oct 13 10:46:36
romanceandlovelyboy: ​ကင်မရာ မန်း​​ကောင်မ​လေးတ​ယောက်လိုချင်ပါတယ် ကျွန်​တော့် ​ကောင်မ​လေးနဲ့ ချစ်တာကို ​သေချာရိုက်ချင်လို့ပါ
2021 Oct 13 08:51:13
cre8: ဇာတ်လမ်းတွေမှာ အချစ်ကြမ်းပြီး ကဗျာတွေမှာ နလုံးသားနုတဲ့ ကိုနရသူကို မမဖီလဲအားပေးပါတယ်လို့ 💜💜💜
2021 Oct 13 07:13:09
2021 Oct 13 07:13:05
john7: အားပေးနေတယ် ကိုနသူရ ခင်ဗျာ
2021 Oct 13 00:40:24
2021 Oct 12 18:38:32
PhyoChan: ကိုနရသူရေ မလုပ်ရဘူးနော် ဘဲကြီးးး 😁
2021 Oct 12 16:38:49
loverboy2011: ကျောင်းကိုတော့ နှုတ်ဆက်မသွားပါနဲ့ဗျာ....ကိုနရသူ ရဲ့ fan တွေ ကျောင်းထဲမှာ အများကြီးပါဗျာ...။
2021 Oct 12 16:26:53
narathu: မသေမချင်းတော့ စာရေးမှာပါ ကတိဗျာ
2021 Oct 12 16:26:21
2021 Oct 12 16:17:53
Jolly Roger: တခြား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကြောင့် ဘာကြောင့် မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အချိန်ရရင် ဇာတ်လမ်းလေးတေ ဆက်ရေးပါဦး
2021 Oct 12 16:17:48
Jolly Roger: စိတ်မကောက်ပါနဲ့ဆြာရယ် .. နော် ..
2021 Oct 12 16:17:34
Jolly Roger: @narathu, ဟေ့လူကြီး၊ ပရိတ်သတ် လက်မခံရင် ခြေမချပါဝူးမလုပ်နဲ့လေဗျာ၊ ခညားလက်ရာကို မျှော်နေတဲ့သူတွေက တပုံကြီး။
2021 Oct 12 16:11:57
zippy: ကိုနရသူရေ့ အကို့ဖန်ပါဗျ...ကျောင်းကိုခွဲမသွားပါနဲ့
2021 Oct 12 16:06:34
2021 Oct 12 15:44:45
loverboy2011: ကိုနရသူရေ...ကျောင်းကို နှုတ်ဆက်သွားတော့မလို့လားဗျာ....။
2021 Oct 12 15:36:54
narathu: မဂ္ဂဇင်းအတွကိ ရေးခဲ့တာလေးလည်း အားတာနဲ့တင်လိုက်ပါ့မယ်
2021 Oct 12 15:35:45
2021 Oct 12 15:34:29
narathu: ပရိသတ်လက်မခံရင် စိတ်ချပါ ခြေမချပါဘူး
Total Members: 45169
Latest: Myint Mo Z
Total Posts: 38493
U Lay Two
Mar Lar Soe Lwin
Ma Khin Wai
Mg Thwet Kyi
maung moon zaw